Kedu ka ihu igwe dị na ndagwurugwu ụwa? | Network Meteorology
Kedu ka ihu igwe dị na ndagwurugwu ụwa?
Ndagwurugwu Viso, na Lombardia (Italytali)
Ndagwurugwu bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa. N'etiti n'agbata ugwu, ha bụ depressions nke elu ụwa n'etiti mkpọda abụọ nwere mgbatị na ogologo. Ma, Nwetụla mgbe ị na-eche otú ihu igwe dị na ndagwurugwu ụwa?
Eziokwu bụ na ọ dị oke iche, ebe ọ bụ na ịnọ n'etiti elu abụọ dị elu ma ọ bụ karịa, okpomọkụ na-anọ ntakịrị elu karịa ka ha kwesịrị ịdị na-atụle ọnọdụ ya. Ka anyị hụkwuo gbasara ihu igwe dị na ndagwurugwu nke ụwa.
1 Kedu ụdị ndagwurugwu dị?
1.1 Ndagwurugwu dị warara
1.2 Nnukwu ndagwurugwu
Kedu ụdị ndagwurugwu dị?
Ndagwurugwu Chamonix, na France
Ndagwurugwu dị warara
Mmiri mmiri (osimiri, apiti mmiri) na-ebi n'akụkụ kasị ala nke ndagwurugwu ahụ, ọ na-achịkwa nke ukwuu maka mpụga mpụta. Ya mere, usoro nhazi ọwa ahụ na-eme na ala nke ọwa n'onwe ya, ebe a na-eme mkpọda ahụ na ọbụna nwere ike iduga na mbuze.
Ndagwurugwu ndị a, a na-akpọkwa "ndagwurugwu ndị tozuru etozu", jikọtara na osimiri ndị dị larịị, ebe ọwa ahụ nwere obere akụkụ nke ndagwurugwu ahụ ebe ọ bụ na mbara ala ahụ sara mbara. Ndagwurugwu ebe ide mmiri bụ ihe a na-ahụkarị, na-eme ka ọ bụrụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe ma na-adịghị agbanwe agbanwe.
Kedu ka ihu igwe dị na ndagwurugwu?
Ndagwurugwu, n'agbata ugwu, nwere ihu igwe, ma ugwu. A na-eji ọnọdụ dị nwayọọ mara ọtụtụ afọ, n'agbata 20 na 30ºC, belụsọ n'oge oyi, ebe snow na-agakarị (n'okpuru -10ºC). Ugwu nwere ọnọdụ ihu igwe na-adabere na mpaghara ahụ, n'ihi mbelata okpomọkụ na ịdị elu, nke a maara dị ka gradient vetikal vetikal. N'okwu ndị a, anyị na-ekwu na ọ dị njọ, ebe ọ bụ na maka 100m ọ bụla nke temometa na-ada site na 0,5 ruo 1ºC na ikwu iru mmiri nwekwara tụlee.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mmiri ozuzo, ọ bara ụba, karịa 900mm / afọ, na mkpọda ikuku (ebe ikuku na-efe), na pere mpe na lee lee anya (nke ikuku n’edobe ya) nke bu ebe ndagwurugwu di.
Ọ masịrị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Kedu ka ihu igwe dị na ndagwurugwu ụwa?
Ihe ngosi GIF gbasara ezigbo egwu nke okpomoku uwa
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ala ọma jijiji ji eme na Ekwedọọ